Ushwankathelo lwezixhobo / Izixhobo | Iplaza ye-Ota yabemi
Igumbi loqeqesho, intenetya, intenetya yetafile>
Unokubila ngokulula ukuphelisa ukunqongophala kokuzilolonga kunye nokumila.
Kwi-tennis yentenetya kunye netafile yentenetya, indawo yokwenza umthambo iza kwahlulwa kubini ngemini emisiweyo yeveki, kwaye kuya kufakwa umatshini wentenetya kunye netafile yentenetya ukuze ukwazi ukuziqhelanisa nentenetya kunye netafile yentenetya.
Malunga neemitha ezili-105.9 zesikwere
I-tennis ezenzekelayo: 1 umntu ngomatshini ngamnye (ayinakutshintshwa endleleni)
Itafile yentenetya ・ ・ ・ Ukuya kuthi ga kubantu aba-1 ngeyunithi nganye
Ukuzivocavoca kwe-Aerobic / ukunyamezela kwe-cardiopulmonary
Umatshini wokuprinta: I-Labode LXE
Umatshini wokubaleka: I-Labode LXS
Ukuhamba ngebhayisikile: Ibhayisekile engenacingo V67Ri
Qeqesha isifuba sakho sonke: I-FUNASIS Chest Press
Qeqesha umphambili wesifuba: FUNASIS bhabha
Qeqesha amagxa akho: FUNASIS lat ukutsala
Qeqesha zombini iingalo (ikakhulu umzimba ongaphezulu): I-FUNASIS multi-pulley
Qeqesha umqolo wakho: FUNASIS back extension
Qeqesha iiflegi zakho: FUNASIS Rotary Toso & Twist
Qeqesha umzimba wakho osezantsi: FUNASIS Umlenze wokushicilela kunye nokuphakama kwethole
Qeqesha icala elingaphambili lomlenze: Ukongezwa komlenze we-FUNASIS
Qeqesha umva wemilenze yakho: UFUNASIS uhleli umlenze ojikelezayo
Qeqesha ngaphakathi nangaphandle kwamathanga akho: Ukongezwa kwe-FUNASIS kunye nokuThimba
Igxalaba kunye nomva: Ukulungiswa komzimba II Ikhonkco
Umzimba ophezulu: Ukulungiswa komzimba II Ikhonkco elisezantsi
Umrhumo wokusetyenziswa kwesibonelelo kunye nemali yokusetyenziswa kwezixhobo ◆ Nceda uxolele utshintshiselwano.
Kanye (akukho mda wexesha) 330
Imizuzu engama-1 ngalo lonke ixesha 330
Ixesha eli-1 ngemoto ngeyure 330
Ukususela ngo-9: 00 ukuya ku-22: 00 yonke imihla.
* Isicelo sokusetyenziswa kude kube yi-21: 00
Ukusetyenziswa komatshini kude kube ngo-21: 45
Ithenisi ngokuzenzekelayo (iiyunithi ezi-3)
NgoMvulo / uLwesithathu (Icandelo 1-6)
NgoLwesihlanu (Icandelo 1-22)
Itafile yebhola (iiyunithi ezi-5)
NgoMvulo / uLwesithathu (Icandelo 1-3)
NgoLwesihlanu (Icandelo 1-11)
Ixesha le-tennis ngokuzenzekelayo
Ixesha letafile yentenetya
Nceda uthenge itikiti kumatshini wokuthengisa ngomhla wokusebenzisa kwaye ufake ngqo.
Siza kuqala ukwamkela intenetya ngokuzenzekelayo kunye netafile yentenetya imizuzu engama-30 phambi kwecandelo ngalinye (imizuzu eli-1 ngaphambi kodidi lokuqala kuphela), kwaye siya kulamkela icandelo elilandelayo kwakamsinya nje ukuba lizaliswe.
Amagumbi oqeqesho ayafumaneka nanini na.
Amagumbi atshintshayo (indawo yokuhlamba, iilokhari, iirack shoe) ziyafumaneka nazo.Nceda usebenzise ixesha elininzi.
Xa usebenzisa igumbi loqeqesho okanye itafile yentenetya, nceda uzise izihlangu ezingaphakathi kwezemidlalo.
Xa usebenzisa i-auto yentenetya, nceda uzise irakethi yentenetya kunye nezihlangu zetenisi (ukuze zisetyenziswe ngaphakathi).
Kukho into enkulu kakhulu "igumbi loqeqesho, intenetya, itafile yentenetoni ikhuphoni eliqhelekileyo".
Abasebenzi baya kuchaza indlela yokusebenzisa izixhobo.
Abafundi besikolo samabanga aphantsi kunye nabancinci abanakusisebenzisa, kodwa intenetya ezenzekelayo kunye netafile yentenetya inokusetyenziswa kuphela kwibanga lesi-5 nelesi-6 lesikolo samabanga aphantsi ukuba uhamba nomgcini.
Amatikiti okupaka awanakukhutshwa.